Ciil-mooge ?Ka hor dhamaadka sannadkan waxaan howl-gelinayaa duulimaadkii Somali Airline? – Radio Daljir
Agoosto 26, 2013 3:53 b 0
Muqdisho, August 26, 2013 – Dowladda Soomaaliya ayaa dib u howl-gelinaysa shirkadii diyaaradaha ee Soomaali Airline, taas oo aan shaqeyn mudo ku siman 22 sano oo dalku bur bur ku jiray.
Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Cabdulaahi Ciil-mooge ayaa shaaciyey in dowladda Soomaaliya ay ka rajo qabto, in sanadkan gudihiisa la howl-geliyo diyaaradii Soomaali Airline, taas oo aan dunida lagu arag mudo dheer.
Wasiirku ?wuxuu xusay in ay haatan heleen Afar diyaaradood oo lagu shaqo geliyo, sidoo kale dowladdu waxay xiriir la samaysay duuliyaal sare oo Soomaali, waxaana la diyaarinayaa qorshe dib howsha loogu bilaabayo.
Mudane Ciil-mooge ayaa yiri “Afar diyaaradood ayaa hadda ballan-qaad u haysanaa inaan ku howl-galino? Somali Airline, waxaan rajeynayaa in sannadkan inta aanu dhammaan aanu howl-gelinno, sida qorshuhu yahay hadduu Alle idmo.”
Arritan ayaa ku soo beegmaysa xili dhowaan dowladdu ay heshiis la gashay maamulayaasha shirkadaha diyaaradaha ee dalka jooga, kuwaas oo ay ka wada-hadleen arrimo dhowr ah oo ay ku jirto ilaalinta xuquuqda rakaabka, sidoo kale waxaa la filayaa in dhowaan la soo wareejiyo maamulka hawada Soomaaliya.